8da badal ee ugufiican AirTags ee Android | Androidsis
Ignacio Sala | 15/07/2021 22:00 | Qalabka kale
Nidaamyada goobta ma aha wax cusub, dhab ahaantii, waxay suuqa ku jireen sannado badan, in kasta oo ay hawlgal ka duwan tan iyo markii ay la xiriiraan kaarka SIM-ka, ay si ballaadhan shirkaduhu ugu adeegsadaan xakamaynta gawaarida gawaarida.
Si kastaba ha noqotee, markii la bilaabay AirTags, oo ah nalka goobta oo noo ogolaanaya inaan ka helno shay kasta guriga iyo haddii aan ku weynay meel ka baxsan guriga, waxay u muuqataa in Apple ay dib u soo celisay giraangiraha, markii aysan run ahaantii sidaas ahayn. Xaqiiqdii, AirTags waa kuwa ugu dambeeya ee suuqa gala.
Bilo kahor soo bandhigida rasmiga ah ee AirTags, Samsung waxay soo bandhigtay Galaxy SmartTags. Waqti dheer kahor, shirkadda Tile waxay billowday nalka goobta oo runtii ahaa kacaankii aaladda noocaan ah. Laakiin iyagu keligood ma aha. Hadaad rabto inaad ogaato waxa ugu fiican beddelka Apple AirTags ka shaqeeya Android, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
1.1 Calaamadaha Tile
3 Chipolo HAL
Haddii aan ka hadalno Tile, waa inaan ka hadalnaa shirkadii ugu horaysay ee soosaarta shumacyada goobta. Nalalka goobta ayaa adeegsada adeegsadayaashooda shabakadda si ay u helaan walxaha ka lumay aragga, waanu lumnay, way na xadeen
Iyada oo loo marayo codsiga Android, waxaan ka dhigi karnaa qalabka dhawaqa haddii uu dhow yahay ama ka hel khariidada haddii ay fog tahay, dhammaantood waa bilaash oo iyadoon bixin lacag bixin.
Tile wuxuu dhigayaa qashinkeena 4 moodal oo kala duwan, moodooyinka aan hoos ku faahfaahinayno:
Tile Stikcer wuxuu ka muuqdaa gadaal iyadoo leh a koolo noo ogolaanaya inaan ku hagaajinno nalka qalab kasta oo adeegso abka si aad u hesho aaladda marka aragga la waayo. Way ku habboon tahay in loo raadiyo aaladda telefishanka markii aad safar ku aadayso barkimooyinka fadhiga, kamaradda, furayaasha guriga, kiniinka ...
Leh a 36mm gaadho baytarigu wuxuu soconayaa 2 sano, waa biyuhu, waxaa lagu heli karaa oo keliya madow, waxaa lagu qiimeeyaa 39,99 euro oo xirmo ah 2 cutub ama 64,99 euro oo xirmo ah 4 cutub. Cabirkeedu waa 27 mm x 7,3 mm wuxuuna leeyahay sameecad yar oo soo saari doonta cod naga caawin doona helitaanka walxaha lumay.
Tile Pro ku daraa wax qabad inaad si fudud ugu qaadatid furayaasha, boorsooyinka dhabarka iyo walxaha kale ee aynaan rabin inaynu lumin. Kani waa qaabka leh nooca ugu dheer ee loo yaqaan 'Bluetooth' oo leh illaa 122 mitir.
Waxay ku dhex jirtaa sameecad soo saarta dB ka sarreeya moodeellada kale ee ay bixiyaan Tiles, batteriga la beddeli karo wuxuu soconayaa 1 sano, waa biyo-diid (ma ahan biyo-diid) wuxuuna leeyahay cabir ah 42x42x6,5mm. Moodelkan waxaa lagu heli karaa midab madow, caddaan, casaan, buluug qoto dheer iyo casaan.
Qiimaha 1 Tile Pro waa 34,99 euro, xirmada 2 Tile Pro waa 59,99 euro halka xirmada 4 ay u socoto ilaa 99,99 euro.
Tile Slim waxaa loogu talagalay ku isticmaal meelaha cidhiidhiga ah, sida boorsada dhexdeeda, dusha sare, dusha shandadaha. Waxaa lagu heli karaa midab madow, casaan, buluug qoto dheer iyo casaan, wuxuu gaarayaa 61 mitir.
Waxay ku dhex jirtaa afhayeen ku hadla codka kaas oo noo ogolaanaya inaan helno shayga uu ku xiran yahay (badanaa boorsada jeebka ama boorsada), batari aan la beddeli karin wuxuu soconayaa 3 sano, waa biyo-la’aan waxayna leedahay cabir dhan 86x54x2,4 mm.
Qiimaheedu waa 29,99 euros halbeeg halka xirmada 2 cutub ay tahay 59,98 euro.
Tile Mate wuxuu na siiyaa naqshad aad ugu eg Tile Pro oo leh god lagu xiro walxaha aan marwalba dooneyno inaan xakameyno, laakiin kala bar kala duwanaanta Bluetooth-ka: 61 mitir.
Waxay ku dhex jirtaa afhayeen iyada oo ay sii deynayso dhawaqa noo ogolaanaya inaan helno shayga ay ku xiran tahay, baytariga waa la beddeli karaa wuxuuna leeyahay muddo 1 sano ah, waa biyo la’aan wuxuuna leeyahay cabir dhan 35x35x6,2 mm.
Tile Mate ayaa lagu qiimeeyaa 24,99 euros. Xidhmada labada qaybood ah waa 47,99 yuuro oo 4-ta cutub ah waxay gaarayaan 69,99 euro. Waxaa kaliya lagu heli karaa midab cad.
Dhammaan qiimaha lagu tilmaamay Tile beacons waxay u dhigmaan websaydhka shirkadda. Hadaan rabno naga badbaadi xoogaa yuuro, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inay iyaga toos uga iibsadaan Amazon iyada oo loo marayo xidhiidhkan.
Galaxy SmartTag ayaa ah midka ugu badan ee loo adeegsan karo AirTag tan iyo markii lagu daro u shaqeynta sida raad raaca shayga, ku dar badhan Taas oo aan ku dhaqaajin karno aaladaha kale ee casriga ah ee casriga ah ee la jaan qaadi kara si loo sameeyo ficilada sida furitaanka albaabka garaashka, daminta dhammaan nalalka guriga ku jira, dhaqaajinta ama kicinta alaarmiga ...
Marka la eego qaabeynta, tani waxay aad ugu egtahay tan nasashada nalalka goobta in aan ka heli karno suuqa, oo leh daloolka qaybta sare si aan u qabanno. Marka laga hadlayo cabirka, sidoo kale waxay aad ugu egtahay inta kale ee xalka suuqa (39x10x19 mm). Galaxy SmartTags waxaa lagu heli karaa laba nooc:
SmartTag istaandarku wuxuu adeegsadaa Bluetooth 5.0 Energy Low (LE)
SmartTag + Ka faa'iideyso kooxda ballaaran ee ballaaran (UWD) si aad ula socoto waxyaabaha.
Marka laga hadlayo hawlgalka, labaduba waxay u shaqeeyaan si isku mid ah. Baaxadda ugu badan ee Samsung beekons locator waa Mitirka 120, sida Tile Pro, 20 mitir ka badan Apple AirTags.
Si loo helo shayga ay ku xiran tahay, waa inaan ka faa'iideysanaa Galaxy Find, oo ah shabakad taas isticmaal dhammaan taleefannada casriga ah ee Samsung si aad u hesho meesha uu nalka u yaalo in aan waynay la'aanteed isticmaaleyaasha soo ag mara, hel wixii ogeysiis ah (hawlgal la mid ah Apple's AirTag)
Midka kaliya laakiin aan ka helno Galaxy SmartTag, wuxuu la mid yahay AirTags: waxay ku habboon yihiin oo keliya nidaamka deegaanka. Taasi waa hadaadan haysan taleefanka casriga ee Samsung, Kama bixi kartid inaad ka fikirto qaab kale.
Qiimaha Samsung Galaxy SmartTag wuxuu ku saabsan yahay 29,99 euros, inkasta oo Amazon aan ka heli karno qiimo dhimis xiiso leh haddii aan iibsanno una o cutubyo badan. Waxaa lagu heli karaa caddaan iyo beige.
Hadday xilligan tahay, waxa kaliya ee aadan ka jeclayn astaamahan goobtani waa helitaanka midabbada, waa inaad tixgelisaa ikhtiyaarka uu Chipolo noo siinayo Chipolo ONE. Chipolo ONE wuxuu leeyahay a naqshad wareegsan oo leh hal dalool taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku sudhanno furayaasha, boorsooyinka, boorsooyinka dhabarka ...
Qodobka kale ee muhiimka ah ee nalkaasi waa awood u leh soo saar cod ah 120 db taasi waxay noqon doontaa mid faa iido badan inta aad kaheleyso alaab lumay ama meel maran Waxay kujirtaa a batteriga la beddeli karo Waxay socotaa laba sano waana mid buufi kara (IPX5) laakiin lama quusin karo.
Es la jaan qaadaya Amazon Alexa iyo Google Assistant, si aan u xakamayn karno goobtaada adoo adeegsanaya amarrada codka. Intaa waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku hagaajino digniinta moobilka si aanan uga tagin shayga uu ku xiran yahay, oo ah shaqo ku habboon kuwa ugu macquulsan ee sidoo kale laga heli karo inta ka hartay nalalka aan ka hadalno tan. maqaalka.
Nalalka goobta Chipolo waxaa laga heli karaa Amazon for 24,90 euross midab jaalle, cadaan, buluug, madow, casaan iyo cagaar cabirkiisuna yahay 38x38x7 mm.
Sida Samsung SmartTags, Cube Pro wuxuu ku daraa badhanka qalabka, badhanka noo ogolaanaya kaliya inaan isticmaalno sida kamarad kontoroolka fog casriga ah. Waxay leedahay sameecad soo saarta cod ah 101 dB, marka ma adkaan doonto in la helo walxaha lumay ee aan rabno inaan soo kabano.
Batariga la beddeli karo wuxuu socdaa hal sano, waa IP67 aan biyuhu lahayn. Markii aan ka dhaqaaqno aaladda aan ku xirnay nalkan, codsigu wuxuu soo saari doonaa alaarmiga si uu noo xusuusiyo inaan soo galnay qaabka clueless.
Qodobka taban ee shuruudo goobeedyadu waa taas Waxay leedahay kala duwanaansho loo maro Bluetooth-ka kaliya 60 mitir, markii xulashooyinka ugu badan ee liiskan, ay ka bataan masaafadaas. Nalalka loo yaqaan 'Cubre Pro beacons' waxaa lagu qiimeeyaa $ 29,99 oo hadda lagama heli karo Spain.
Filo Tag beacons ayaa ka baxaya naqshadeynta caadiga ah ee wareega, iyagoo na siinaya a naqshad qaab leh oo leh cabbir ah 21x41x5 cm, waxay leeyihiin masaafo dhan 80 mitir oo batteriga, la beddeli karo, wuxuu na siiyaa noocyo kala duwan oo ah 12 bilood.
Xagga sare, waxay ku dhex jirtaa nooc xarig ah waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno nalka on keychain, boorsada, boorsada… Waxayna na ogeysiinaysaa marka aan ka fogaanno aaladda.
Waxay ku daraysaa batoon markii laba jeer la riixo, ka bilaabanaysa ku soo celinta qalabkeena moobilka, xitaa haddii qalabku aamusanyahay, markaa waa ilays ku habboon kuwa sida caadiga ah aan xusuusan ama si fudud u lumin labadaba furayaasha iyo taleefanka.
Filo Tag locator beacon waxaa lagu heli karaa casaan, madow, buluug iyo cadaan qiimihiisana, halkii cutub, waa 29,90 euros. Si ka duwan dhammaan badeecadaha ku xusan qodobkan, Filo Tags ayaa laga sameeyay oo laga soo saaray Talyaaniga.
Si looga faa'iideysto dhammaan howlaha Filo Tag na siiso looma baahna in la bixiyo nooc kasta oo rukun ah iyo codsiga, waxaan ku soo dejisan karnaa bilaash adoo adeegsanaya xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Top 8 beddelka in AirTags for Android